Guddiga Xaquuqul Insaanka Itoobiya Iyo Dowladda Abiy Axmed oo Ku Kala Aragti Duwan Xaaladda Gobolka Tigray – Borama News Network
Guddiga Xuquuqul Insaanka dalka Itoobiya ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin deg deg ah si loo xaqiijiyo badqabka dadka rayidka ahi ee ku nool waqooyiga gobolka Tigreeda, halkaasi oo colaad siddeed bilood socotay ay sababtay in boqolaal kun oo qof ay macluul ku habsato.
Guddigani madaxa bannaan balse ay dowladda Itoobiya soo magacawday ayaa ku baaqday in la helo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xaaladda amniga iyo tan bani’aadamnimada ee haatan ka tirta deegaankaasi
Hadalkan ka soo yeeray Guddiga Xuquuqul Insaanka Itoobiya ayaa u muuqda mid ka soo horjeeda mowqifka dowladda dhexe ay ka taagan tahay xaaladda gobolka Tigray oo dhawaan uun ay inta badan la wareegeen maleeshiyaadka daacadda u ah ururka TPLF.
Dowladda Itoobiya ayaa la kulantay dhaleecayn la xiriirta jarista korantada iyo isgaarsiinta gobolkaasi
Waxayse beenisay in ay xannibtay gargaarkii bani’aadanimo ee loo waday dadka tabaaleysan kaddib markii dagaalyahanada fallaagada TPLF ay qabsadeen inta badan gobolka Tigray.
Maalintii Jimcaha ahayd ayaa kumannaan ka tirsan ciidamada dowlada oo la qabtay waxaa lagu soo bandhigay wadooyinka caasimada Meqelle, kuwaasi oo markii dambe loo dhaadhiciyay xabsiga.
Kulan habeenkii Sabtida ahayd uu arrinta gobolka Tigray ka yeeshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa laga sheegay in ay suurtagal tahay in colaad hor leh ay halkaasi ka dhacdo, inkastoo horraantii usbuucan ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday xabbad joojin hal dhinac ah.
Tahriibayaal Ay Dooni Kula Degtay Xeebaha Dalka Tunisiya Iyo Tirada Dadka Ku Dhintay Doonta Degtay
Dagaal Xoogan Oo Ka Socda Magaalada Baladwayne Iyo Faahfaahino Ka Soo Baxaya Dagaalkaasi
Dowlada Somaliya Oo Faah Faahin Ka Bixisay Qaadhaanka lagu leeyahay ee Qaramada Midoobay
Bnnstaff Bnnstaff January 16, 2022
Xisbiga Mucaaridka Ee Wadani Oo Taageerayaashiisa Ugu Baaqay In Ay Ilaaliyaan Amniga
Dabkii Kaymaha Dalka Turkiga Oo Halis Xoogan Ku Haya Warshadihii Dalkaasi